မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: အမျိုးသမီးများအတွက် အကောင်းဆုံး ခရီးသွားပိုက်ဆံအိတ် ဒီဇိုင်း: Crossbody bag
အမျိုးသမီးများအတွက် အကောင်းဆုံး ခရီးသွားပိုက်ဆံအိတ် ဒီဇိုင်း: Crossbody bag
ခုတစ်လော ခရီးသွားရင် ဝတ်တဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းလေးတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။ ခရီးသွားရင် လွယ်တဲ့ မိန်းကလေးပိုက်ဆံအိတ် ဒီဇိုင်းတွေထဲမှာ စလွယ်သိုင်းလွယ်လို့ရတဲ့ စလင်းဘတ်အိတ်အမျိုးအစားဟာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ travel fashion ဘလောက်တစ်ခုမှာဖတ်လိုက်ရတော့ သူ့ပိုစ့်ကို ချက်ချင်း သဘောတူမိတယ်။ အသေအချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကိုယ်လဲ များသောအားဖြင့် ခရီးသွားရင် စလွယ်သိုင်းလို့ရတဲ့ အိတ်ဒီဇိုင်းမျိုးကို သုံးရတာ အဆင်အပြေဆုံးမို့ အဲ့ဒိလို အိတ်မျိုးတွေပဲ လွယ်ဖြစ်တယ်။
စလွယ်သိုင်းလို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်တွေက ကိုယ်ဝတ်တဲ့ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းအတော်များများ (အားလုံးနီးပါး) နဲ့ လိုက်ဖက်တယ်။ တခါတစ်လေ အရမ်းမထူးခြားတဲ့ ဝတ်စုံဒီဇိုင်းမျိုးကိုတောင် စလွယ်သိုင်းအိတ် လှလှလေးနဲ့ လွယ်လိုက်ရင် Chic style ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ခရီးသွားတုန်း အိတ်ပုံစံမျိုးစုံ ယူသွားဖို့ အဆင်မပြေတဲ့အခါ ဝတ်စုံတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ စလွယ်သိုင်းအိတ်လေး တစ်လုံးတည်းနဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်လေ။ စလွယ်သိုင်းလွယ်တဲ့ ပိုတ်ဆံအိတ်ဒီဇိုင်းတွေကလဲ အစုံရှိတယ်။ ကိုယ်သွားမဲ့နေရာနဲ့ လိုက်ဖက်မဲ့ စလွယ်သိုင်း စလင်းဘတ်အိတ်မျိုးကို ရွေးချယ် ယူဆောင်သွားသင့်တယ်။ ဥပမာ မြို့ပြရှော့ပင်းလိုနေရာမျိုးကို သားရည် စလင်းဘတ်လေးလွယ်လို့ရသလို၊ တောရွာတို့ အကြမ်းပဒန်းနေရာတွေသွားဖို့ဆိုရင်ကျတော့ အလွယ်တကူလျှော်ဖွတ်လို့ရတဲ့ နိုင်လွန် စလွယ်သိုင်းအိတ်တွေက သင့်တော်တယ်လေ။
လွယ်ရတာ လှတာတင်မကဘူး။ စလွယ်သိုင်းအိတ်တော်တော်များများက အထဲမှာ အိတ်အခန်းလေးတွေလဲ ပါတတ်တယ်။ အဲ့ဒိအတွက် ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကိုလဲ စနစ်တကျ ကန့်ကန့်သတ်သတ် ထည့်ထားလို့ရတယ်။ ဘယ်အိတ်ဒီဇိုင်းကမှတော့ ရာနှုန်းပြည့် သူခိုး၊ ခါးပိုက်နှိုက်၊ လုယက်တာကို ခံနိုင်တယ်မရှိပေမဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို စလွယ်သိုင်းလွယ်ထားရင်တော့ ပုခုံးတင် ချိုင်းညှပ် ပိုက်ဆံအိတ်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် တော်ရုံတန်ရုံ လုပြေးဖို့ ခက်ခဲတယ်။ တစ်ခုအကြံပေးချင်တာကတော့ အိတ်ကြိုးကို ထူတာလေး ရွေးသင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒိတော့ လုယက်မဲ့သူလဲ အလွယ်တကူ ဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကို လာလုဖို့ မကြိုးစားတော့ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက ခရီးသွားတုန်း အလွယ်တကူ ကိုယ့်အိတ်ထဲကို ပစ္စည်းတွေ အစုံပလုံ ဆန့်သလောက် ထည့်လေ့ရှိတော့ အိတ်ကြိုးသေးရင် ကြိုးပြတ်လွယ်ပါတယ်။ (ဟောင်ကောင်သွားတုန်းက ဘတ်စ်ကားပေါ်အတက်မှာမှ အိတ်ကြိုးပြတ်ပြီး ပစ္စည်းတွေ အကုန်ထွက်ကျခဲ့တာ မှတ်မိသေးတယ်။ အဲ့ဒိတုန်းက ပုခုံးတင် ချိုင်းညှပ် ပိုက်ဆံအိတ်။)
စလွယ်သိုင်း ပိုက်ဆံအိတ်လေးတွေကို ခရီးသွားရင် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း စလွယ်သိုင်းလွယ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သူက ပုံခုံးတင်လဲ လွယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စလွယ်သိုင်းရင်ကျတော့ ပုခုံးက လုံးဝ ပြုတ်မကျတော့တဲ့အပြင် ကိုယ့်ကျန် လက် ၂ဖက်ကလဲ သူ့ကို ထိန်းထားစရာမလိုတော့တဲ့အတွက် အားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ ကင်မရာ ကိုင်တာ၊ Selfie stick ကိုင်တာ၊ ဖုန်းကိုင်တာ၊ လမ်းသွားရင်း မုန့်စားတာ စသည်ဖြင့် လုပ်လို့ရပါတယ်။
အောက်ကပုံလေးတွေကတော့ မဗေဒါ ခရီးသွားရင် လွယ်ဖြစ်တဲ့ အိတ်လေးတွေနဲ့ပုံပါ။ (စလွယ်သိုင်းသိပ်မလွယ်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်းက Mr.Right က စလွယ်သိုင်းလွယ်လို့ ရင်ဘတ်ကြား အိတ်ကြိုးရောက်ရင် မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တကယ် လိုအပ်လာရင်တော့ စလွယ်သိုင်းတာပါပဲ။ ဥပမာ လေဆိပ်ဆင်းလို့ တခြား luggage တွေသယ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့။)
ခု အဲ့ဒိ အိတ် ပန်းရောင်လေးက တော်တော်လေး ရွဲနေလို့ မကိုင်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းလွယ်လိုကောင်းတယ်။ အရွယ်အစားရော ဒီဇိုင်းရော အနေတော်ပဲ
Queenstown လေဆိပ်ဆင်းတုန်းမို့ စလွယ်သိုင်းလွယ်ထားတာ
အပေါ်က မလှတဲ့ မော်ဒယ် မဗေဒါရဲ့ လက်တွေ့ ခရီးသွား ပုံတွေကြည့်ပြီး ခု အောက်က လှတပတ မော်ဒယ်လေးတွေရဲ့ စလွယ်သိုင်းအိတ်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် တွဲဝတ်လို့ရတဲ့ ဝတ်စုံ အိုင်ဒီယာလေးတွေကို ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (ပုံတွေက တချို့ အွန်လိုင်းဆိုင်တွေနဲ့ တချို့ အင်တာနက်က မင်းသမီးပုံတွေပါ)
Posted by mabaydar at 12:40 AM
Labels: Travel Fashion , Travel Tips , ခရီးသြားမွတ္တမ္း
သူမ်ားလဲ စလြယ္သိုင္းအိတ္ေလးေတြကို သေဘာက်ေနတာၾကာျပီ။ လွတာေလးေတြေတြ႕ရင္ ရဲရဲေတာင္ မၾကည့္ရဲဘူး။
3/12/2016 9:04 AM
ခု​ေလာ​ေလာဆယ္​​ေတာ့ shopping mode ျဖစ္​​ေနတယ္​။ shopping mode က အျမဲမျဖစ္​ဘူး။ ႀကိဳက္​တာ​ေတြ႔ရင္​ ၀ယ္​သာ၀ယ္​ ​ေနာက္​ ​ေ​ေတာ့ရင္​ ​ေနာင္​တရ​ေနမယ္​။
3/12/2016 10:46 AM
ဟုတ္တယ္ ခုမွ ေသခ်ာျပန္စဥ္းစားျဖစ္တယ္ ခရီးသြားတိုင္းသယ္ျဖစ္တာ ၾကိဳးအရွည္ စလြယ္သိုင္းရတဲ႔ အိမ္ခ်ည္းပဲျဖစ္ေနတယ္. တခုပဲ မေဗဒါ MR. Right မၾကိဳက္တဲ႔ အခ်က္ေတာ့ နည္းနည္းသတိထားရတယ္. အဲ့ေတာ့ စလြယ္သိုင္းျဖစ္တဲ႔ အခါ အေပၚက ေမာ္ဒယ္ေလးေတြလို ၾကိဳးကို လက္နဲ႔ကိုင္ျဖစ္တယ္. ခုေနာက္ပိုင္း အိတ္ေလးေတြက စလြယ္သိုင္းၾကိဳးအရွည္ရယ္ လက္နဲ႔ကိုင္ရတဲ႔ လက္ကိုင္အတိုရယ္ ပါတာဆိုေတာ့ ပိုအဆင္ေျပတယ္.. မလြယ္ခ်င္တဲ႔အခါ လက္ကကိုင္လုိက္ရံုပဲ။
ဒီပိုစ္႔ ဖတ္လိုက္မွ အဲလို အိတ္မ်ိုး ၀ယ္ခ်င္သလို မ၀ယ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနရာကေန ၀ယ္ကို ၀ယ္ရမယ္ဆိုျပီး ၀ယ္ျဖစ္သြားတယ္... ။ :)
3/24/2016 5:46 PM